AGAASIMAHA MADAXTOOYADU WUXUU KA DHIGAN YAHAY, " HABARTII DUSHEEDII DARUURUHU KU HOOREEN DADBA WADA HEL MOODOO DAAD WARARAC BAY TIDHI"W.Q Abdiqadir Ali Nuur
Sunday September 09, 2018 - 08:49:45 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
AGAASIMAHA MADAXTOOYADU WUXUU KA DHIGAN YAHAY, " HABARTII DUSHEEDII DARUURUHU KU HOOREEN DADBA WADA HEL MOODOO DAAD WARARAC BAY TIDHI".
Hadalkaa agaasimaha madaxtooyada uma arko arin daw ah iyo mid sax ah toona, waxay iila muuqataa dhiiri galin in ay soo curato mar kale aafadii dhiig baxa ahayd, ee dhooyaalka/tahriibka dhalinyarada ee boqolaalka kun aynu ku waynay. Waxaynu waynay muruqoodu iyo aqoontoodiiba marka laga tago maalka xad dhaafka ah ee ay reero badani ku caydhoobeen. Imisaa hooyo iyo aabo guryihii ay ku jireen u xaraashay dhimashada ubadkoodii ay jeclaayeen ee ay sanado badan kusoo tabcayeen.Oo maanta hanti iyo ubadkoodii toona aan hayn! Iyagu dil uguma talo galin ee dhib kala baxsada ayay is lahaayeen laakiin tii waxay sabab u noqotay in ay baddaha ku dhintaan.
Hanti badan oo warshado lagu dhisto oo dalkani lahaa ayaynu ku bixinay in dhalinyaradeenu baddaha ku dhintaan. Dhalinyarada tahriibtay waxay u badnaayeen intii jaamacadaha amma dugsiyada sare ka baxday ee shaqo waayay waayo inta aan waxba barani waxay ku qancayeen shaqo kasta oo la heli karo. Inkastoo, ay tahay in qof waliba ku qanco shaqo kasta oo uu qaban karo lana heli karo, shaqo dhammaanteed waa sharaf.
Haddaba, maba xuma shaqo taga dhaliyarooy ee marka agaasimuhu warkaas in leeyahay wuxuu ka war qabaa in aan dalkeenu haysan passport aduunku ictiraafsan yahay oo lagu socdaali karo, ha lagu shaqo tago amma dano kaleba haloo isticmaalee! Markaas sow maaha tacriiba oo waliba wuxuu ku daray dhib badan oo shul amma shal ah u badheedha intaad da' yartihiin waana markii caqligooda, cilmigooda, iyo tamartooda looga faaiidayn lahaa dalkan soo koraya! Taasina waa cajaba kale, qoomamo iyo ciil!
Intaas dabadeed, agaasimaha iyo madaxtooyada uu ka tirsan yahayba waxaa looga fadhiyaa faahfaahinta hadalkan qadhaadh.
NB: Waa fekerkayga